हुन त सविता माता र म बिचको नाता रगतको नाता होईन – Sabita Saru Sharma - Enepalese.com
इनेप्लिज २०७४ जेठ १५ गते १६:४७ मा प्रकाशित
हुन त सविता माता र म बिचको नाता रगतको नाता होईन, केवल एउटा भावनाको नाता मात्र हो। आजभन्दा करिब एक वर्ष अघि जेठमा म आफ्नो भाग्य हेराउने क्रममा सविता माताकोमा पुगेको थिएँ। हामी हिन्दू धर्मावलम्बी जो कोहीले पनि भगवान् प्रति आस्था राखेका हुन्छौँ र विश्वास र भरोसा पनि गर्छौँ भगवान् माथि। हामी मानब जातीहरुले आफ्नो जिविको पार्जन् का निमित्त जो कोहीले पनि केही न केही काम् गरिरहेकै हुन्छौँ।
तर कोही सफल हुन्छन् त कोही असफल। सफल हुने त सफलता सँगसँगै सगरमाथाको उचाईमा कहिले पुग्न सकुँला भनेर निरन्तर अगाडि बढिरहेको हुन्छ, तर जो असफल भो उसको मनमा अनेकौँ तरङ्गहरु उत्पन्न भईरहेका हुन्छन्। एसो गर्दा पो होलाकि? उसो गर्दापो होलाकि? यो गर्दा पो होलाकि? त्यो गर्दा पो होलाकि? बाकी भिडियो मा …..